Sida loo Play AVI on Galaxy S5 / S4 / S3 Si fudud
> Resource > Samsung > Sida loo Beddelaan AVI in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Tan iyo Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 uu awood u leeyahay in la illaa HD Videos qaban, Galaxy Samsung ay shaki ku jirin waxay noqon doontaa aalad weyn u daawado waxyaabaha warbaahinta. Si kastaba ha ahaatee, ma dhan qaabab video noqon kartaa mid taageero qalab, sida qeyb ka mid ah files AVI. Haddii aad soo gaarto qaar ka mid ah files AVI in ay ku guuldareysato inay ku ciyaaraan waxa ay ku, xalka uu yahay kaliya badalo files AVI si ay Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 qaabab taageeray. Oo waxaad si fudud oo dhaqso shaqadan ku dhameysan kartaa inta aad leedahay AVI aad u fiican in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 video Converter.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) talagalay baahida suuqa cusboonaanta waqtigii oo ku daray Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 in liiska qalabka ay taageerayaan. Waayo, kuwa dhibaato u ciyaaro AVI on Samsung Galaxy, in doono gabi ahaanba gabal fiican ee wararka. Sida AVI weyn oo Converter Galaxy S5 / S4 / S4, Wondershare Video Converter (Video Converter u Mac) ha users badalo qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video AVI in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 ku qasabno yar oo sahlan. Iyo xawaaraha diinta iyo tayada wax soo saarka yihiin kuwo aad u breathtaking.
Hagaha soo socda waa ku salaysan madal Windows. Dadka isticmaala Windows raaci karo talaabo talaabo. Wixii version Mac ee app this, tallaabooyinka aasaasiga ah waa la mid heer sare ah.
1 dar AVI videos in AVI in ay Converter Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
In interface ugu weyn, waxaad kaliya riix badhanka kaalinta magaca sheyga. Markaas, suuqa kala pop-up a kuu ogolaanaya in aad dedeg folder aad meesha files AVI yihiin. Marka aad ka heli file AVI aad rabto in aad ku dar, kaliya waxaa double-riix. Isla markiiba, waa in la keeno doonaa in ay leeg- tahay diinta this app ee. Oo wakhtigaas, waxa aad ku arki kartaa waxa ay soo bandhigeen sida thumbnail ah. Ogsoonow in howlgalka jiitaa-n-dhibic iyo diinta Dufcaddii sidoo kale waxaa laga heli karaa.
2 Dooro Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 sida qaab wax soo saarka
App Tani direcly aad bixisaa horena ah filaayo in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 in ay liiska qaabka wax soo saarka. Hit image qaabka guddiga Qaabka Output ee interface ugu weyn ee. Markaas, waxaad tagtaan dalka "Device" category. Next, riix badhanka arrow hoos ku-category sub in la helo "Samsung" brand. Under tusaha, aad halkan ka arki kartaa dhammaan qalabka Samsung oo caan ah. Just dooro Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 sida qaab wax soo saarka
Fiiro gaar ah: The presets filaayo in, ay ka mid yihiin qaraarka video, heerka yara video iyo heerka jir video, Sida xaqiiqada ah geli karaan qalabka ugu fiican. Haddii loo baahdo, waxaad u baahan tahay inaad la qabsato oo xuduudaheedu adiga by, waxaad ka dhacay karaa "Meeshay" ikhtiyaarka hoos Murayaad Qaabka Output ah loo sameeyo.
3 Start AVI in ay diinta ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Hit ah "Beddelaan" button rukun-midigta hoose oo ka mid ah app this 's interface weyn AVI bilaabaan in ay diinta ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3. Hadda, waxa aad dareemi kartaa si xor ah u sameeyaan shaqo kale on your computer iyadoo la daynin app orod this ee asalka ah. Markii diinta waxaa lagu sameeyey, aad si toos ah riix "Folder Open" butten si aad u ogaato faylasha wax soo saarka. Ugu dambeyntii, kaliya xirmaan Samsung Galaxy si computer via cable aad ka dibna lagu wareejiyo files si ay qalabka u loo maqli karo.